Eziokwu na-atọ ụtọ na amachaghị banyere Teacup Malta - Dịrị
Eziokwu na-atọ ụtọ na amachaghị banyere Teacup Malta
A Teacup Maltese bụ kpọmkwem ihe aha ahụ pụtara - obere obere nkịta Maltese ... 4lb ga-abụ kpọmkwem!
Umu obere umuaka a abanyela ngwa ngwa n'ime ewu 20 gara aga. O siri ike ịhụ ihe kpatara ya:
.B. obere na-acha ọcha na-acha ọcha na nkịta ,
Mara amara maka ọdịdị ịhụnanya ha na omume enyi ha,
Iguzo na gburugburu 4 sentimita asatọ ogologo,
Kwado ọtụtụ mmadụ n'ime obere ahụ ha.
Ma, olee ihe ga-amata gbasara ụdị nkịta a na-azụ anụ?
Nke a bụ ihe itoolu na-atọ ụtọ, na-adọrọ mmasị na obere ama ama iji mee ka ị nwee mmasị na Teacup Maltese nkịta.
1. Teacup Maltese Weighs Dị 4lb
2. Aristotle dere banyere ndị ikwu nke Nkịta Maltese
3. An Nwa Oge Ochie nke Malta
4. The Teacup Maltese Bụ A Royal
5. Teacup Maltese nwere oke mmadụ
6. White bụ Naanị Agba Maka Teacup Maltese
7. Otu Teacup Maltese Nwere Ike Nweta $ 2,000 USD
8. Ha enweghị ike ịrịgo steepụ
9. Teacup Maltese Nkịta Na-egosi Hypoglycaemia
Nkịta a bụ obere ụdị nke Maltese pere mpe.
Ndi American Kennel Club amataghi nkuzi dika ndi nke ya, a na-ahazi ya dika obere nkita Maltese.
N'ihi nke a, ị nwere ike ịchọpụta na edebanye aha Teacup Maltese gị dị ka nkịta Maltese na Kennel Club. Agbanyeghị, ọ ga - ekwe omume na ị ga - enweghị ike ịdebanye aha gị maka pooch ọ bụla ma ọlị n'ihi ịbụ obere site na ọkọlọtọ izu .
Dogsmụ nkịta ndị a pere mpe dịka 4lb - ma e jiri ya tụnyere ụmụnne ha tozuru etozu na-atụle 8lb.
Seendị nke nkịta a bu nke izizi hụrụ na narị afọ nke 17 na 18, mgbe ndị na-azụ ihe nwara ime nke a obere nkịta ọbụna tinier .
Nke a mere site na-agafe obere Poodles na Spaniels n'ime ahịrị.
N'ezie, n'otu oge e chere na e nwere ụdị nkịta asatọ dị iche iche a kọwara dị ka ndị Malta.
Agbanyeghị, ka oge na-aga, etubere ọkọlọtọ ụdị wee mechie na 1964 ma agbanwebeghị kemgbe ahụ.
Mmalite nke Nkịta Maltese
Kpọmkwem mmalite nke nkịta Maltese onwe ya amaghi.
A na-eche na ọ sitere na Switzerland Spitz ụdị nkịta, ma ọ bụ a onye ikwu nke Tibet Terrier .
N'oge gara aga, e kewapụrụ ndị Malta dị ka a onye òtù ezinụlọ Bichon , ma, nke a ezighi ezi dịka ụdị ụdị abụọ ahụ dị iche iche.
Na-esi na Malta pụta, nkịta ndị a na-ewu ewu n'etiti obodo ndị Gris oge ochie. Ọkà ihe ọmụma Greek bụ Aristotle bụ otu n'ime ndị izizi kpọtụrụ 'Melitaei Catelli', onye ikwu mbụ nke nkịta Teacup Maltese.
Nke a malitere n’afọ 370 Tupu Oge Ndị Kraịst.
Ndị na-ede akwụkwọ Roman dere banyere 'obere nkịta ọcha', nke ụfọdụ ndị ọkọ akụkọ ihe mere eme kọwara dị ka nkịta mbụ Maltese.
3. Unu Anyi Dogge nke Malta
N'ime afọ iri gara aga, amarala Teacup Maltese site n'ọtụtụ aha dị iche iche - ọ bụghị naanị Rover ma ọ bụ Fido.
Kemgbe ụdị a bidoro na Malta, ejirila ọtụtụ aha mara ha. Nke a gụnyere, mana, ọnweghị oke:
Ndi Anyi Dogge nke Malta
Nkịta na Malta
Ladmụ nwanyị Roman Dog
Maltese ọdụm Nkịta
Ndepụta aha ogologo a sitere na ogologo oge ha dị ka anụmanụ ndị enyi .
Dịka ị pụrụ ịhụ site na ndepụta aha ndị a niile nwere otu ihe; nkịta Maltese bụ ìgwè a ma ama, mara maka mkpakọrịta ya, ịhụnanya na ọdịdị enyi.
A hụla Maltese n'akụkụ ụkwụ nke Royal Royalty, ya na Mary Queen of Scots na Queen Elizabeth I nwere otu .
N'ihi ihe nketa ha n'obí eze, a na-azụkarị ndị Maltese ka ha na-eri ihe kachasị mma na nke kachasị mma n'ihi na ha bụ ndị na-eri nri.
Ha choro nri dika 20% protein. Agbanyeghị, ogo dị mkpa karịa ogo, yabụ ọ ka mma mgbe niile ịzụ obere ọnụọgụ nke isi iyi dị elu karịa ọtụtụ protein dị ala.
Abụba na mmanụ kwesịrị ihe dịka 5% -10% iji nyere aka mee ka uwe nkịta gị na-enwu gbaa.
N'ihi na ha nwere mmasị n'ebe na-emepe emepe obere ọbara shuga , ọ dị mkpa na a na-enye nkịta ndị a obere na mgbe.
Na oge karịa karịa, ha ga-ahọrọ ogo dị elu, nri na-enweghị ọka.
Ndị a teacup nkịta nọrọ na-egwuri egwu ma na-agbasi ike mgbe ha ghọrọ nkịta.
Nkịta a kachasị nwee obi ụtọ mgbe ya na ndị mmadụ ibe ya na-egwuri egwu, ọ hụrụ n'anya ịnọnyere ndị ọhụụ.
Nke a yikarịrị ka ọ sitere na ha dị ka nkịta nkịta , ọdịdị nlekọta ha na-abịa dị ka akụkụ nke ngwugwu.
Ha na-enwe obi ụtọ isoro ndị enyi ha bụ mmadụ kpọnye ha n’elu ihe ndina. N'ezie, n'adịghị ka obere nkịta ndị ọzọ, ọ ga-abụ na ha agaghị enwe ike ịzụlite omume ndị ahụ na-atọ ụtọ na nkụja ị na-ahụkarị na obere nkịta ndị ọzọ.
Otú ọ dị, ịdị obere ha pụtara na ha nwere ike ịma jijiji mgbe ha na-ezute nkịta ọhụrụ, karịsịa na gburugburu ebe ha na-amachaghị.
Okwu mmeghe nke ndi ohuru, ebe na ihe ekwesiri ime na nkịta gị onwe gị ijeụkwụ , na ọtụtụ oge Teacup Maltese ga-ewere ihe na-aga ha.
Omume ha mere ka ọ dị mfe ịzụ ha na nghazi ndị ha na-eme ka ha bụrụ ndị mmụta ngwa ngwa.
O di nwute, nkita na-ezi ihe bu ndi a ma ama siri ike ịkwụsị ụlọ n'ihi obere eriri afọ ha. Enwere ike idozi nke a site na ọtụtụ nkwado na ndidi dị mma.
Teacup Maltese bụ ezigbo obere nkịta na-acha ọcha.
Ha na-ebukarị ihe dị ka sentimita asatọ n’ogologo, ná nkezi, ọ na-adị 4 ma ọ bụ 5 lb. Mamụ nwoke na ụmụ nwanyị anaghị adị iche n’ibu na ibu.
Dị ka ka ọkọlọtọ izu , ọcha bụ naanị agba a nabatara ka nkịta bụrụ. A na-ewere agba ndị ọzọ (gụnyere nkịta nwere agba abụọ na nke atọ) anabataghị ya kemgbe 1913.
Achọpụta ngwa ngwa site na gburugburu ha, imi ojii na anya ojii - anya n'onwe ha na-akọwakarị dị ka ndị nwere ọgụgụ isi. Isi ojii ha nwere ike gbanwee pink ma ọ bụrụ na ha enwetaghị ìhè anyanwụ zuru oke, ma ọ bụ ọ bụrụ na ha bụ nkịta ọhịa na-abata n’oge.
A na-ewerekwa nkịta a dị ka hypoallergenic yabụ na-eme nhọrọ mara mma maka ndị na-arịa ọrịa nfụkasị.
Na-alụ nwanyị nkịta a
Ọtụtụ mgbe, a ga-etinye nkịta egwuregwu ụmụaka n'ime ihe bụ mara dị ka 'nwa nkita ịkpụ' , ebe uwe ahụ dị mkpụmkpụ - ihe na-erughị sentimita asatọ.
Typedị uwe a chọrọ obere mmezi, na-abụghị ịsachasị kwa izu ma ọ bụ karịa.
Ọ bụrụ na ọ fọdụrụ ogologo oge, uwe ahụ na-achọ nlekọta dị ukwuu iji kwụsị ya ịlụ. A ga-achọ nhicha ahụ kwa ụbọchị, a ga-achọkwa ịsa ahụ kwa izu iji wepu nsị akwa na ihu ha.
Iji zụọ nkịta a, ị ga-azụkọ obere nkịta abụọ Maltese.
Dogsdị nkịta Maltese dị nha nwere ike ibu naanị ụmụ nkịta atọ na-enweghị nsogbu, yabụ n'ọtụtụ ọnọdụ, a ga-emepụta nkịta abụọ ma ọ bụ abụọ maka nkịta ọ bụla.
Agbanyeghị, ọbụlagodi otu nwa nkita na - etinye nne ya nnukwu nsogbu, ma ọtụtụ oge, nkịta ndị a nwere muo site na ime nwanyi caesarean .
Leveldị nrụgide a n'ahụ nne nwere pụtara na ezigbo nlekọta ahụike bụ ihe kacha mkpa.
Nchedo ndị a pụtara na puppy puppy Teacup na-efu n'etiti $ 750 na $ 2,000 USD.
Ego dị oke ọnụ, na ewu ewu ha, na-eme ka ụdị a bụrụ ọkacha mmasị maka 'ndị na-azụ azụ ụlọ' na igwe igwe nkịta. Typesdị ndị a na-echekarị banyere ịme ngwa ngwa karịa ọdịmma nke nkịta ha.
Na-ezere ụdị ndị a dị mfe ma ọ bụrụ na ịmara ihe ị ga-achọ:
Ezigbo onye na-azụ ihe anaghị akpọsa nkịta ha n'ebe dị ka CraigsList ma ọ bụ GumTree
Ezigbo onye na-azụ ihe ga-eme nlele ahụike niile dị mkpa na sili na dam tupu ozuzu
A ezi breeder ga-abụ ihe karịrị obi ụtọ n'ihi na ị na-ahụ gị nwa nkita otutu ugboro na nne ha
N'ihi ozuzu ozuzu, ọ nwere ike ọ gaghị ekwe omume mgbe niile ịhụ nna ya, mana ezigbo onye na-azụ ya ga-enwe ọ thanụ karịa inye gị ozi gbasara ahụike na ọnọdụ ya.
Nta nke nkịta a na-eme ka ọ bụrụ nke na-emebi emebi.
Nụ ọkụ n'obi ha ịnọ n'akụkụ gị na-efe efe, mana, ị ga-akpachara anya dị ka a ga - asị na ha ga - abanye n'okpuru ụkwụ gị ọ dị mfe ịhapụ ha na maka ihe ọghọm.
N'elu nke a, akwa mgbago nwere ike ịbụ nnukwu ihe ịma aka maka obere nkịta na ọbụna nnukwu ihe ọghọm na-echere ime.
N'ihi ya, a na-ahụkarị nkịta ndị a n'ụlọ niile dị n'otu ụlọ, dị ka ụlọ elu ma ọ bụ nnukwu ụlọ.
Dị ka igwuri egwu na na-ahụ n'anya dị ka nkịta ndị a , ọ dị mkpa na a na-ahụ maka egwuregwu niile gbara ụmụaka gburugburu.
Ọ bụ ezie na ikiri obere nkịta ndị a na ụmụntakịrị na-emekọ ihe na-ama mma, ụmụaka nwere ike na-eme mkpọtụ na nkịta ndị a pere mpe nke na ọ naghị ewe ihe maka imebi.
Ya mere odi nkpa ka ejiri nlezianya kpoo nkita ndi a, ya mere oburu na nmekorita ya na nwatakiri di nkpa, odi nkpa ka ikuziri nwata ka ya na nkita gwuo.
Obere nkịta ndị a nwere ikike ịmalite ọtụtụ nsogbu ahụ ike dị iche iche.
Ihe kachasịkarị bụ hypoglycaemia (ntụgharị ọbara shuga dị ala ) - nke a nwere ike ibute ihe ọdịdọ na ọnwụ ọbụlagodi na ejighị nlezianya nyochaa.
Iji nyere aka jikwaa ọnọdụ a, nkịta izizi kwesịrị iri nri ugboro atọ ma ọ bụ anọ kwa ụbọchị iji nyere aka mee ka ogo shuga dị n’ọbara ha dịrị.
A makwaara nkịta ndị Malta maka nsogbu ezé ha.
Ndị nwe ha kwesịrị ịdị njikere ị na-asa ezé ha mgbe niile, jiri ezé na-ata ata, ma na-eleta dọkịta ezé nkịta mgbe niile.
Nkịta ndị Maltese na-enwekarị nsogbu imeju, obi na nsogbu iku ume n'ihi obere onye mmebe ya .
Ndị ga - abụ ndị nwe nkịta a kwesịrị ịkwadebe maka ụgwọ ego ọ bụla dị elu, yana ọ bụ ihe ị ga - atụle mgbe ị na - achọ ịzụta otu n'ime ụmụ bekee a.
Ná nkezi, otu Teacup Maltese na - adị n’agbata afọ iri na abụọ na iri na ise.
Dịka ị pụrụ ịhụ, Teacup Maltese dị ọtụtụ karịa naanị nwa mara mma na akpa aka ma ọ bụ nkuzi.
Ndị nkịta oge ochie a hụrụ ọhụụ na ọdịda nke mmepeanya ma nwee ọtụtụ ndị nwe ama ama tupu ha adaba n'apata gị.
Ọ bụ ezie na ha maara nke ọma, ha bụ ndị a ahụ n'anya na-eguzosi ike n'ihe .
Ha chọrọ nri dị elu, na-eri naanị ihe kachasị mma ma ha chọrọ usoro ịmị anya iji lekọta uwe mara mma ha.
Ma ị nwere obere pooch a, na-achọ inweta otu, ma ọ bụ na ị na-agafe, nweere onwe gị ịhapụ anyị okwu na-agwa anyị echiche gị banyere obere ọmarịcha nkịta a.
8 Ajụjụ Ndị Azịza banyere German Shepherd Lab Lab
nkịta m na -ata ya ụkwụ na -acha uhie uhie
imi nwa nkịta na -acha uhie uhie
ụlọ nyocha olulu onye ọzụzụ atụrụ German
kedu ihe bụ ụdị nkịta cur
ogologo ntutu nwere ọla ọcha dapple dachshund